Magaalada Garoowe oo xalay laga xusay 1-da Luulyo “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Magaalada Garoowe oo xalay laga xusay 1-da Luulyo “SAWIRRO”
Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xalay aqalka Madaxtooyada Puntland ee Garoowe kaga qeyb-galay munaasibad balaaran oo lagu xusayey koowda Luulyo oo ku beegan maalintii xoriyadda Ummadda Soomaaliyeed ka qaateen gumaystaha iyo midowgii labada Gobol.
Xafladda ayaa waxaa kaloo ka qeyb galay Madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Puntland, Wasiiro ka tirsan maamulkaasi, saraakiisha caiidamada Puntland, Isimo, Waxgarad, Aqoonyahan, Haween, Dhallinyaro, dadweyne badan kuwaasi oo diyaar u ahaa ka qeyb-galka munaasibadaan balaaran.
Qaar ka mid dadkii ka qeyb galay xafladda oo goobta hadal ka jeediyay ayaa sheekeeyay taariikhda loo soo maray halgankii xornimada dalka, iyagoo xusay in 1-da Luulyo ay tahay maalin ahmiyad gaar ah u leh shacabka Soomaaliyeed.
Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad ka jeediyey madasha ayaa umahadceliyey dhammaan ka soo qeyb-galaayasha xafladda , isagoo sanadkaan sanadkiisa kale Alle uga baryey in nabad iyo barwaaqo Ummadda Soomaaliyeed ku gaaraan, waxaana uu ciidanka Puntland uga mahadceliyay sugidda amniga.
Musharax Mideeye oo hambalyo ku aadan 1-da Luulyo u diray shacabka Soomaaliyeed
Madaxweynaha: “Kowda Luulyo xornimada iyo midnimada ka sokow waxay inoo tahay maalintii dib u soo kabashada”